गण्डकी प्रदेशको पहिलो जितमा अर्जुन उत्कृस्ट, प्रदेश-१ को रोमान्चक जित – WicketNepal
गण्डकी प्रदेशको पहिलो जितमा अर्जुन उत्कृस्ट, प्रदेश-१ को रोमान्चक जित
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ बैशाख २१, शनिबार २०:२४
विकेटनेपाल, बैशाख-२१ , शनिवार
काठमाडौँमा जारि मनमोहन मेमोरियल अन्तर-प्रदेश अन्डर-१६ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवार सम्पन्न २ खेलमा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश-१ विजयी भएका छन्।
प्रतियोगिता अन्तर्गत समुह ‘ए’ बाट प्रदेश-३ र प्रदेश-७ सेमीफाइनल प्रवेश गरिसकेका छन् भने समुह ‘बि’ बाट प्रदेश-१ सेमीफाइनल प्रवेश गरेको छ भने अर्को टिमको टुंगो लाग्न बाँकी छ। आइतबार समुह चरणको अन्तिम २ खेल खेलिनेछ। प्रदेश ५ र प्रदेश २ बीचको खेलले समुह ‘बि’ बाट सेमीफाइनल पुग्ने टिमको टुंगो लाग्नेछ।
1. Province No.3220 – 4* +3.893
2. Sudurpaschim (Province No. 7)220–4+1.367
3. Gandaki (Province No. 4)312–2-0.684
4. Karnali (Province No.6)303–0-6.483
1. Province No. 121013+0.1
2. Province No.21 – – 1 1 –
3. Province No.5101 –0-0.1
अर्जुन कुमालको उत्कृस्ट प्रदर्शनमा गण्डकी प्रदेशको जित
टियु मैदानमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याटिंग गरेको कर्णाली प्रदेशले २०.३ ओभरमा ८७ रनको योगफल तयार गरेको थियो। ८८ रनको लक्ष्य गण्डकी प्रदेशले २२ ओभरमा १ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो।
Arjun Kumal ( File Photo )
गण्डकीको जितमा यु-१६ राष्ट्रिय क्रिकेटर समेत रहेका अर्जुन कुमालले अविजित ४९ रन बनाए। प्लेयर अफ द म्याच समेत चुनिएका उनले ५४ बलमा ५ चौका प्रहार गरे। यस्तै गण्डकीका बलरहरु शरद तिवारी, नितेश गिरि, निशान कुँवर र आदित्य थापाले २/२ विकेट लिएका थिए। कर्णाली प्रदेशको लागि ब्याटिंगमा दिलिप सुनारले ४४ रन बनाए।
प्रदेश-१ को रोमान्चक जित
दिनको दोश्रो खेलमा प्रदेश-५ ले टस जितेर ब्याटिंग गर्दै निर्धारित ३० ओभर मध्ये २८ ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर १२५ रनको योगफल तयार गरेको थियो। उसको लागि प्रकाश गिरिले ५८ ( ५१ बलमा ५ चौका र २ छक्का ) तथा अभिशेक गौतमले २१ रन बनाए। प्रदेश-१ का बलर बिपिन महतोले ३ विकेट ( ५-०-२६-३ ) तथा समिर तिम्सिनाले २ विकेट लिए।
Suman Sundas of Province No. 1
१२६ रनको लक्ष्य प्रदेश-१ ले अन्तिम बलमा १ विकेट बाँकी रहंदा पछ्यायो। ओपनर आइन्स्टाइन रिजालले ४० तथा सुमन सुन्दासले ४१ रन बनाउदै जितको आधार तयार गरे। १२२ रनमा ९ विकेट गएको अवस्थामा सर्वनकिस्कुले अविजित ६ रन बनाउदै टिमलाई जित दिलाएका थिए।
प्रदेश-५ का बलर अभिशेक गौतमले ३ विकेट ( ६-०-२५-३ ) तथा रमेश कुर्मीले २ विकेट लिए पनि जितको लागि पर्याप्त भएन।
खेलको प्लेयर अफ द म्याच सुमन सुन्दास घोषित भए।